Tilmaamaha Isticmaalka Tijaabada ee CCRP: Hoggaanka
PowerPoint Template: Mawduuca bandhigga CCRP wuxuu ka tarjumayaa qaabka iyo qaabka loo isticmaalo ee lagu sifeeyey tilmaamaha nooca. Markaad isticmaashid qaab-dhismeedka, fadlan ha ka badalin ama ha ka saarin wax walba oo ka yimi master-kaaga.
Sawir: Sawirada iyo sawir-qaadashada kaliya kuma filna inay ku faafiyaan shaqada caalamiga ah ee CCRP. Sawiradeenu waxay u muuqdaan inay yihiin muuqaal dhab ah ee dadka ama meelaha, markaa fadlan iska ilaali isticmaalka filtarrada ama saameynta mintida si kor loogu qaado sawirada. Sababtoo ah in badan oo ka mid ah sawiradayada waxay leeyihiin dad dhab ah, waa lagama maarmaan in la helo dukumentiyo sax ah mawduucyada sawirada iyo ilaha si loo isticmaalo sawirada.
Sawirada Sawirada: Sawirrada ay qaataan shaqaalaha McKnight Foundation ama sawir qaadayaasha shaqeeya, mawduuca sawirada si cad u oggolaanaya isticmaalka guud ee mawduuca mawduuca ama muuqaalka ayaa loo baahan yahay. Soo qaado foomka mawduuca sawirka halkan.
Wixii sawiro ah oo uu qof kale qaato, heshiiska mulkiilaha ee sheegayo bixiyaha wuxuu siinayaa adeegga dadweynaha ee McKnight Foundation (ama sheegidda bixiyaha inuu helo ogolaansho sax ah). Ka soo qaado foomka heshiiska lahaanshaha ee copyrightka halkan.
Sawir Sawir ah: Markay suurtagal tahay iyo / ama marka codsi ka haysto mulkiilaha xuquuqda daabacan, dhibcaha sawirada ee alaabooyinka dadwaynuhu waa inay sheegaan sawirqaadaha ama ilaha sawirku. Kaararka waa in lagu dhejiyaa geeska hoose ee sawirka ama si toos ah uga hooseysa sawirka ee warqad yar yar laakiin la akhrisan karo, sida CCRP-ogolaanshaha fontka Verdana.